Izimbangela zokukhwehlela ebusuku emntwaneni nakumuntu omdala
Isikhumba yisimpawu esivamile. Futhi ngokuvamile kaningi kubonakala noma kuba namandla kakhulu ngokuhlwa noma ebusuku. Abantu ngokuvamile bahlobanisa uphawu olungathandeki nezinkinga ku-bronchi noma amaphaphu, kodwa, njengoba umkhuba ubonisa, izimbangela zokukhwehlela komntwana ebusuku Noma kumuntu omdala angase afihleke kuphela ezifweni ze-pulmonological, kodwa futhi nokuphulwa komgudu wokugaya noma ezindaweni zokulwa nesifo senhliziyo.
Iziphi izifo ezingabangela ukuhlaselwa kokukhwehlela ebusuku, sizoxoxa ngalesi sihloko.
Kungani ukukhwehlela kuba namandla ebusuku
Mhlawumbe uqaphele ukuthi uma emini ingane egulayo noma umuntu omdala kuphela i-podkashlivaet encane, bese ebusuku lo mbonakalo uba yinkambinkimbi ebuhlungu, inqatshelwe ukulala nokuphumula. Kungani lokhu kwenzeka? Kwenzekani emzimbeni ebusuku?
Kuvela ukuthi ukuhlaselwa kokukhwehlela kwebusuku kukhishwa isimo sesiguli esiphezulu, futhi kaningi ku-posture efanayo. Lokhu kuholela eqinisweni lokuthi i-mucus, eqhubeka iqoqa, ihamba kancane kancane edongeni elingemuva emqaleni. Yikuphi okubangela ukucasuka kwekhanda elimangalisa futhi kubangele ukukhwehlela.
Esikhundleni se-supine, i-sputum, ngaphezu kwalokho, ijwayele ukuqhuma, futhi lokhu kuphazamisa ukukhwehlela. Imiqondo enjalo, ngendlela, inomlingiswa ocacile futhi inomthelela ekuqedeni ama-microorganisms e-pathogenic anqwabelene emphefumulweni wokuphefumula.
Kodwa, ngaphezu kwalokho, ukukhwehlela ubusuku kungabangela umoya owomile ekamelweni lokulala (ikakhulukazi ngenkathi yokushisa) - nakho kuyamcasula umonakalo, okwenza kube nesifiso esinzima sokususa umphimbo wakho.
Amazinyo omntanakho ahlezi
Ukuhlaselwa ebusuku kokukhwehlela kwengane, ngendlela, ngezinye izikhathi kungachazwa ngesifo, kodwa ngenqubo yokuphila. Isibonelo, iqiniso lokuthi amazinyo omntwana aqoshiwe.
Iqiniso liwukuthi ezimweni ezinjalo ukukhiqizwa kwemali kukhuliswa kakhulu emvutheni, futhi nje akwazi ukugwinya njalo. Lokhu kunzima kakhulu ephusheni, okuholela ekwenzeni ukuphefumula futhi kubangele ukuhlaselwa ukukhwehlela ebusuku, okwesaba kakhulu omama. Kodwa ngokushesha nje lapho inqubo yokuqhuma kwamazinyo ubisi iphelile, uphawu lokukhathazeka luzoyeka.
Ukutheleleka okuphefumulayo okuphefumulayo
Kodwa ukuhlasela ebusuku kwe-ARVI kokukhwehlela kwengane noma umuntu omdala kuyinto, mhlawumbe, into ejwayelekile kakhulu. Futhi lihlala, njengomthetho, kuze kube amasonto amathathu. Kwabanye (ikakhulukazi ezigulini ezibuthakathaka), ukukhwehlela kwamagciwane kwenzeka izikhathi eziningana ngonyaka, okwenza kubonakale kuseduze ukuthi isiguli sikhonsa njalo.
Futhi kufanele kuqashelwe ukuthi ngokutheleleka ngegciwane, lesi sibonakaliso ngokuvamile asiwona uphawu olulodwa. Kuyo kuhlangene nobuthakathaka, ukuphikisana noma umphimbo obuhlungu, impumu egijima, ukukhuphuka kokushisa komzimba kanye nezinye izimpawu ezaziwayo kubo bonke.
Ezimweni zokuqala zalesi sifo ukukhwehlela kulula ukubhekana nalo. Ukwenza lokhu, vele uthintane nodokotela.
Isikhumba nge-sinusitis, i-laryngitis ne-adenoids
Izimbangela zokukhwehlela ebusuku kubantu abadala kanye nezingane zingagcinwa kwisinusitis (ukuvuvukala kwesono se-paranasal). Ngendlela, kulezi zimo, ngezinye izikhathi yiyona kuphela isibonakaliso sefomu elingapheli lesi sifo, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi ungaphathi kahle isifo njalo ebusuku.
I-cough ihambisana nenqubo yokuvuvukala embranini emangcwabeni ye-larynx, ebizwa ngokuthi i-laryngitis. Ekuqaleni kwesifo, uvame ukuqina, omile futhi ophazamisayo, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, isiguli sikhula ukukhulelwa kwesisu. Lokhu kukhwehlela kuyabuhlungu ikakhulu ebusuku. Ngokuvame ukuhambisana nobuhlungu emqaleni, ukukhathazeka, ubuthakathaka kanye nokukhanda ikhanda. Futhi, endleleni, ukukhwehlela ubusuku obumile emntwaneni, lapho evuka khona lapho ekhukhumezeka futhi ephazamiseka, angayifakazela isimo esibi se-laryngitis-croup yamanga.
Ku-adenoids, ukukhwehlela ubusuku akuwona uphawu oluvamile, kepha kusenzeka kaningi. Futhi kwenzeka, njengoba umthetho, ngokukhula kwezicubu ze-lymphoid kuya ku-2 no-3 degrees, okubangela ukucasuka kweziphetho zesibindi ku-pharynx ne-nasopharynx. Okusho ukuthi, uma kwenzeka lesi sifo sithatha ifomu elanele.
Ukucela isikhashana ku-ENT kuzo zonke lezi zimo kuzosiza ekuqiniseni ukuxilongwa, futhi kanye nokuqedwa kwesizathu kuzodlula nokukhwehlela.
Ukungezwani komzimba kuyimbangela evamile yokukhwehlela
Isizathu esivamile esifanele sokukhwehlela ezinganeni nakubantu abadala kuyisifo sengqondo. Futhi ngobuningi bezimangalo, lesi sibonakaliso singenye yezibonakaliso zokuqala zalesi sifo, bese i-coryza, ukukhala nokuhlunguphaza emphinjeni ingajoyina ukukhwehlela. Ngendlela, nge-allergies, ngokuvamile ivela okokuqala ngqa ebusuku.
Kumele kukhulunywe ukuthi esinye sezici zobunzima bokukhwehlela okubangelwa ukwelashwa yi-spontaneity and nonproductiveness: isiguli sikhohlela ngokuzumayo, ngenxa yokuthi asikho isizathu esicacile, isikhathi eside asikwazi ukusula umphimbo wakhe, akafumani i-phlegm, kanti ukukhwehlela akuletha ukukhululeka.
Ngakho-ke, ngobusuku obuphindaphindiwe ukukhwehlela owomile, izizathu ezinzima ukuzichaza, kufanele uqaphele futhi wenze ucingo oluphuthumayo kudokotela, ngoba ukusabela okwenziwe isiguli kungase kube ukuqala kokuthuthukiswa kwe-asthma ye-bronchial.
E-asthma ye-bronchial, kukhona nefomu lokukhwehlela
Isibonakaliso sokuqala kokuthuthukiswa kwe-asthma ye-bronchial kungase kube ukukhwehlela ubusuku obomvu kumntwana noma kumuntu omdala. Ukukhwehlela okunjalo kulandela isiguli hhayi kuphela ebusuku, kodwa futhi nangomzamo wokusebenza.
Ngaphandle kwalokho, ngaphezu kwefomu lobudala lesi sifo, kukhona nesifo sofuba esibangelwa ukukhwehlela. Futhi ngenxa yayo ayinayo izimpawu ngesimo se-dyspnoea noma isondo. Njengomthetho, kubonakala kungenasifo esingapheli, okuhlala isikhathi eside cishe izinyanga ezimbili, ukukhwehlela ukuthi, lapho kungekho khona ukwelashwa, kancane kancane uthola izibonakaliso zesifo se-asthma: ukuphefumula, ukushaya umoya, ukushaya umoya, ukuzwa ukukhukhumeza, ukuthuthumela okukhulu nokuhlaselwa kwesaba.
Ngendlela, kubaluleke kakhulu ukuthi ungaphuthelwa isigaba sokuqala salesi sifo futhi ngesikhathi sokubona udokotela, okuzokwenza kube lula kakhulu inkinga yesifo.
Izimbangela zokukhwehlela ebusuku emntwaneni noma kumuntu omdala nazo zingabhekwa nezinkinga zenhliziyo. Iningi lalezi zifo liholela ekutheni leli gumbi lishiya ukubhekana nomsebenzi obelwe wona ukupompa ivolumu edingekayo yegazi. Ngenxa yalokhu, ingaba namandla emaphashini. I-membrane yamangqamuzana ihlanganisa ukuqhuma okuphefumulayo, okuholela ekukhunjini komkhuhlane. Ngokujwayelekile, uphawu oluchazwe luvame kakhulu endaweni ephakeme, ebusuku, futhi luhambisana nomzwelo wokuntuleka komoya, ukuphelelwa umoya nokuphefumula.
Ukukhwehlela okunjalo kwenzeka ngemuva kokususwa kwenhliziyo.
Izimbangela zokukhwehlela ebusuku emntwaneni nangomdala: reflux ye-gastroesophageal
Njengoba i-reflux ye-gastroesophageal, ukuphumula kwe-sphincter engezansi ye-esophagus kuyabonakala, okungahambisana nokungena kokuqukethwe kwesisu emuva kwesigcawu.
Ngokuvamile lokhu kuyinto evamile yokuphila, okusiza ukukhulula esiswini ekudleni okugonywe ngenkathi bedla. Kodwa uma ukusebenza kwe-sphincter kuphazanyiswa, ifomu le-reflux liyakhula, lapho ukukhuphuka kwanda khona kanye nokuqukethwe kwesisu kudala ukucasuka noma ngisho nesilonda se-mucosa esophageal. Kwezinye izimo, i-reflux inamandla kangangokuthi ingabangela umonakalo ngisho nasemathangeni amaphaphu.
Zonke lezi zenzakalo zihambisana nokuphuza, ukunambitheka okumuncu emlonyeni nokukhwehlela owomile, okukhulunywa ikakhulukazi ebusuku.
I-ascaridosis esigabeni sokuqala (sokufuduka)
Ukuhlaselwa ebusuku kokukhwehlela kungase kube uphawu lwendlela yokuqala ye-ascariasis. Uma ukutheleleka kulawa ma-helminths, ekuqaleni kwesifo, uphawu oluvame kakhulu ukukhwehlela okumile noma okuqhuma, kanye nezikhalazo zokuphefumula nokuphuza kwesifuba. Uma kubhekwa kuleso siguli esineziguli, esomile noma esinomthunzi, kulalelwa, futhi ku-roentgenogram kukhona amasayithi wokungena (ukuvuvukala), kuze kube ngu-4 cm usayizi, okushintsha indawo yawo, ngenxa yokuhamba kwezimpungushe ze-ascarid. Lawa ma foci ngokuvamile ayanyamalala ngemva kwezinsuku ezingu-5 kuphela, kodwa angahlala cishe inyanga.
Ngaphandle kwesici esishiwo ngenhla, lesi sifo sihambisana nokunyuka egazini lama-eosinophils (amaseli ayingxenye yeqembu leukocyte futhi enza imisebenzi yokuzivikela).
Ukukhwehlela ebusuku kumuntu omdala: izizathu zilele ekubhemeni
Abantu, ababhemayo njalo futhi abaningi, izizathu eziningi zokwenzeka kokukhwehlela. Amangqamuzana angaphandle emphefumulweni wephefumula angeke akwazi ukubhekana nokukhishwa kwamakhemikhali anqwabelene, ababhemayo bavame ukuba ne-bronchitis kanye nengozi enkulu yomdlavuza wamaphaphu.
Ngenxa yalokho okushiwo ngenhla, abathandi bayabhema ugwayi-omunye ukukhwehlela ekuseni nasebusuku. Ukuqoqwa kwekhampasi kubangela isifiso esicacile sokusula umphimbo wakho uma ushintsha isimo sakho sokulala ngesikhathi ubuthongo noma lapho uvuka embhedeni ekuseni. Lokhu kukhwehlela kuhambisane, njengokubusa, ngokuhamba kwe-sputum enamandla futhi kungabangela izinkinga eziningi.
Uma lo mkhuba ungaholela ekuguleni okungapheli, ukuyeka ukulula kuzoholela ekuqedeni uphawu oluqeda amandla.
Ukukhwehlela ebusuku - lokhu kuyingozi
Njengoba ubona, izizathu zokukhwehlela ebusuku emntwaneni noma kumuntu omdala zingahluka kakhulu. Izifo, izifo ezivuthayo, izifo zenhliziyo, izinkinga zamathunjini, ukusabela okweqile kanye nemikhuba emibi yiluhlu olungaphelele lwezinto ezingabangela ukukhwehlela ebusuku kumuntu.
Kusobala ukuthi lesi sibonakaliso asikwazi ukukhombisa ngokunembile ukuthi kwenzekani ngempela emzimbeni wesiguli, ngakho kubalulekile ukulandelela ukuthi kukhona yini ukubonakaliswa okuhambisanayo, futhi kudlule ukuhlolwa nodokotela. Kuphela kulokhu, ukwelashwa kokukhwehlela ebusuku kuzophumelela, futhi wena noma ingane yakho kuzosusa uphawu olubuhlungu olungahlinzeki ukulala. Yiba nempilo!
Isithende esibuhlungu: izimbangela, izindlela zokwelashwa. Ukulimala kwezemidlalo
Ukwelashwa kokulimaza ngaphansi kwezindlela zamehlo nezindlela zokwelapha
Uma i-rhinitis iphazamisa ukuphefumula
Kubi Perun unkulunkulu. Lokho kudinga abantu?
Isaladi Easy nenhle nge isaladi green futhi inkukhu: zokupheka ezithakazelisayo
Sennheiser HD 800 headphone: Ukubuyekezwa kwe onobuhle, izici, kanye nokubuyekeza of the abanikazi
Punching ezivalekile Ukhonkolo: incazelo
Tocopherol ivikela umzimba kusuka amagciwane radicals khulula
Tipper semitrailer: izinhlobo kanye Ukucaciswa
Footballer Tomas Gubochan
Yini edingekayo ukuze uqoqe imibhalo ukuze ipasipoti ngomntwana?
Yeka indlela okuyingozi ukhunta toadstool elimhlophe?